Nisy nandrovitra tamin’ny andron’ny herisetra an-dalambe faharoa avy amin’ny ankavanana hiringiriny ny sainan’ny Vondrona Eoropeana tao amin’ny Parlemanta Zeorziana · Global Voices teny Malagasy
Nikasa hamaky hatrany ny sakan'ny polisy ireo mpanohitra ny fihetsiketsehana
Voadika ny 13 Aogositra 2021 4:25 GMT
Pikantsary nalaina tao amin'ny horonantsary Bloomberg Quick Take https://www.youtube.com/watch?v=AQ6zc9vWgQ0
Navoaka voalohany tao amin'ny OC Media ity lahatsoratra ity. Navoaka etoana ny lahatsoratra nasiam-panovana araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Vahoaka an'arivony maro, anisan'izany ireo mpikatroka mpiaro ny zon'ny pelaka sy ireo mpanohana ary ny mpitarika ny mpanohitra, no nivory teo ivelan'ny tranoben'ny parlemanta tao Tbilisi ny talata 7 Jolay ho fanoherana ny famoretana an-kerisetra ny diabem-pireharehana izay nokasaina atao ny omalin'iny.
Nofoanana ny diabem-pireharehana izay nokasaina atao ny Alatsinainy 6 Jolay rehefa avy nidina an-dalambe ireo mpanao fihetsiketsehana mahery setra mpankahala pelaka taorian'ny antso nataon'ny fiangonana Ortodoksa Zeorziana. Mpanao gazety miisa 53 farafahakeliny no voatafika nandritra ny fifandonana. Fanafihana toy izany ihany koa no voalaza fa niseho ny Talata.
Nandritra ny fihetsiketsehana Talata, izay narovan'ny polisy dia namelatra ny saina miloko avana teo akaikin'ny lakroa vy napetraka tsy ara-dalàna teo ivelan'ny parlemanta ny omalin'iny ireo vondrom-piarahamonina pelaka Zeorziana sy ny Fireharehana Tbilisi.
Tamin'ny voalohany dia niaro ny toerana teo alohan'ny tranoben'ny Parlemanta izay niangonan'ny mpikatroka tamina fihetsiketsehana am-pilaminana ny polisy ary nandritra izany fotoana izany no nivory teo anoloan'ny fiangonana Kashveti eo ampitan'ny parlemanta ny mpanao fihetsiketsehana mpankahala pelaka.
Fotoana fohy taorian'izay, nirongatra niditra ny mpanohitra ny fihetsiketsehana ary nanafika ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny herisetra tamin'ny sisiny telo, ary nikasa hamaky hatrany ny sakan'ny polisy. Ny sasany nitoraka atody na tavoahangy plastika feno fasika ary niafara tamin'ny fisamborana izany.
Tsy namoaka fitaovam-piadiana hiadiana amin'ny rotaka indray ny polisy, ao anatin'izany ny tifitra rano, izay matetika ampiasaina amin'ny fihetsiketsehana tsy misy herisetra na tsy dia mahery setra manohitra ny governemanta, toy ny nandritra ny valan'aretina coronavirus sy amin'ny toetr'andro mangatsiaka.
Afaka ora maromaro dia nodiovin'ny polisy ny faritra manoloana ny parlemanta ary nitondra ny vahoaka niala teo izy ireo ka namela ny vondron'olona avy amin'ny elatra farany havanana naka indray ny toerana. Norovitin'ireo vondrona ny sainan'ny Vondrona Eoropeana izay nahantona teo ivelan'ny parlemanta avy eo ary nodorany. Nesorin'ireo mpanao fihetsiketsehana ihany koa ny saina ny omalin'iny.
Nilaza ny Minisiteran'ny Atitany fa olona miisa 100 no notanan'izy ireo ny harivan'iny, ary navotsotra ny 68 tamin'izy ireo taoriana kelin'izay.
Nanatevin-daharana ny fihetsiketsehana manohitra ny herisetra ireo vondron'ny mpanohitra marobe, anisan'izany ny antoko Libertarian Girchi – More Freedom, European Georgia, ary Lelo.
Fanairana teo ivelan'ny orinasam-pahitalavitra Pirveli
Nanao hery setra tamin'ny mpanao gazety nandritra ny hariva ireo vondrom-pankahalana, isan'izany i Guram Palavandishvili, izay mitarika ny Fikambanana ho fiarovana ny Zon'ny Ankizy. Mpitsikera be vava ny vondrona LGBT sy ny famoriam-bahoaka i Palavandishvili. Notanana nandritra ny hetsi-panoherana toy izany ihany koa izy tamin'ny taona 2019.
Nandritra ny fifandonana, nanafika ireo ekipan'ny fahitalavitra avy ao amin'ny Formula ireo mpanohitra ny fihetsiketsehana tamin'ny fikasana hanapaka hosina (tariby) hisakanana ny fantsona tsy handefa fandaharana.
Norahonan'i Palavandishvili manokana ny talen'ny OC Media, Mariam Nikuradze, ary nilazany hoe “hisy ho faty aminareo.”
Lehilahy iray hafa tsy fantatra no nandrahona ny “hamotika” ny fakantsarin'i Nikuradze “teo an-dohany”.
Fotoana fohy talohan'ny nanombohan'ny fihantsiana ny fihetsiketsehana dia nisy andian-dehilahy nanafika mpaka sary iray avy ao amin'ny Palitranews nanoloana ny Parlemanta, izay nitarika ny fitazonana am-ponja voalohany tamin'io andro io.
Nitatitra ny fanetsehana polisy faobe teo ivelan'ny biraon'izy ireo ny marainan'ny Alarobia teo ny orinasam-pahitalavitra tsy miankina Pirveli, izay ny telo tamin'ireo mpanao gazetiny no naratra ny alatsinainy teo.
Nilaza ny tatitra avy amin'ny sampan-draharaha misahana ny filaminana Zeorziana ny fandaharam-baovaon'ny Pirveli izay nanondro fa misy vondrona maromaro mikasa ny hanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny biraon'ity fantsom-pahitalavitra ity.
Nanohana ny zon'ny pelaka Zeorziana ny Pirveli, sy ireo orinasam-pahitalavitra Formula sy Mtavari ary nitsikera ny governemanta noho ny valitenin'izy ireo manoloana ny heloka bevava fankahalàna farany teo.
Ny Alarobia maraina, nitatitra ny Minisiteran'ny Atitany fa olona miisa efatra fanampiny nosamborina noho ny fanakantsakanana ny asa fanaovan-gazety sy ny herisetra natao tamin'ireo mpiasan'ny fahitalavitra Pirveli sy Mtavari ny Alatsinainy teo. Mbola tsy nisy toy izany hatrizay raha ny herisetra natao tamin'ireo fampahalalam-baovao matihanina raha teo am-piezahana nitantara ny fihetsiketsehana manohitra ny Fireharehana izy ireo.